अरबमा काम गरेर पसिना बगाउँदै गर्दा नेपालमा श्रीमती अर्कैसंग हिडेपछि, श्रीमानको श्रीमतीलाई यस्तो मार्मिक पत्र – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/अरबमा काम गरेर पसिना बगाउँदै गर्दा नेपालमा श्रीमती अर्कैसंग हिडेपछि, श्रीमानको श्रीमतीलाई यस्तो मार्मिक पत्र
अरबमा काम गरेर पसिना बगाउँदै गर्दा नेपालमा श्रीमती अर्कैसंग हिडेपछि, श्रीमानको श्रीमतीलाई यस्तो मार्मिक पत्र
ज्युदै भए पनि भित्र भित्र म कत्तिपटक मरेको छु, तिमी बुझ्दिनौ । बुझ्ने सामर्थ्य यदि तिमीमा भाको भए,यस्तो खबर सायदै सुन्नु पर्थेन होला । आफ्नो जीवन तिम्रै लागि साँचेर बाचिरहेको थिए । तर तिमी भने ठिक विपरीत सोच्दी रहिछौ । तिम्रै खुशीका लागि निरन्तर श्रम गरिरहे अरबमा, तिमी भने मेरो श्रमको उपजलाई दुरुपयोग गरेर मेरो खिसिटिउरी गर्नमा तल्लिन भयौ ।
यो चाल पाएपछी, म ज्यादै विक्षिप्त भएको छु । मेरो मन धुजा धुजामा फाटेको छ । कुनै कुल्लीझै, मुटु भित्र गुम्सिएका तिम्रा सम्झाना र यादका भारी बोकेर काममा जानका लागि तयारी गर्दै थिए, त्यो दिन । अचानक नेपालबाट धनिराम काकाले फोन गरेर सुनाउनु भएको खबरले एक्कासी भाउन्न भयो । म भुइँमा ढलेछु । केहि समय पश्चात होसमा आएपछि, पीडा झन बल्झियो ।
मलाई विश्वास लागिरहेकै थिएन, तिमी अर्कै सङ्ग कुम्लिएको खबर । के चिजको कमि हुन दिएको थिए र? तिमीलाई चाहिएका कुराहरु पुर्याएकै थिए, होईन र? हप्ता-दिन भयो ड्युटीमा गएको छैन, प्यारी । सुत्न खोज्छु निदाउन सक्दिन । बग्रेल्ती आइरहन्छ तिम्रो झझल्को । पहिलेको जस्तो म सङ्ग अरबको माटोमा काम गर्न जोस-जाँगर केही छैन । छिन छिनमा चसक्क पोलिरहन्छ मन । बाँकि यसको अंश तलको भिडियोमा सुन्नुहोला :
श्रीमान विदेशबाट एयरपोर्ट पुग्ने बित्तिकै श्रीमती पो’इला हिडिन्, छोराछोरी रुँदै आमाको पर्खाइमा (हेर्नुस् भिडियो)